HP diski ike Iweghachite: Olee naghachi ehichapụ faịlụ site HP Ike diski
> Resource> Draịvụ> Olee naghachi ehichapụ faịlụ site HP Ike diski
Mmadụ na mberede ehichapụ ma ọ bụ formatted faịlụ site na gị HP diski ike? Ma ọ bụ faịlụ furu ruru ka diski ike ire ure ma ọ bụ nje agha? Mgbe ahụ, ị ​​na-na na na-nri ebe ugbu a. Isiokwu a na-aga ikwu banyere otú naghachi data si HP diski ike na 3 nzọụkwụ.
Tupu na-n'ime mgbake nzọụkwụ, ị mkpa ntị ka otu ihe: Mgbe gị faịlụ na-efu si HP diski ike, n'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi na nhichapụ, formatting, disk nrụrụ aka, ike ọdịda, wdg, na unu kwesịrị ịkwụsị eji gị disk ịzọpụta ọhụrụ faịlụ ozugbo. New faịlụ ga overwrite gị furu efu faịlụ. Ozugbo nke ahụ mere, ọ ga-adị ike naghachi furu efu faịlụ site na HP diski ike, ọbụna agaghị ekwe omume.
Ọzọ, ka na-amalite na-amụta otú naghachi faịlụ site na HP ike draịva na nzọụkwụ.
Olee otú naghachi data si HP ike disks
Nke mbụ niile, na-a HP diski ike data mgbake ngwá ọrụ: Wondershare Data Recovery ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac.
Ma nke data mgbake software bụ pụrụ ịdabere na ọkachamara. Ị nwere ike iji ha na-agbake iche iche iche iche nke data si HP diski ike na gị na Windows ma ọ bụ Mac OS, gụnyere photos, videos, ọdịyo faịlụ, ozi ịntanetị, Office akwụkwọ, PDF, HTML na ndị ọzọ. Tupu mgbake, ị nwere ike ihuchalu ọdịnaya nke furu efu faịlụ maka ịlele.
Download free ikpe version nke usoro ihe omume n'okpuru na nwere free agbalị!
Ịdọ aka ná ntị: Adịghị wụnye ihe omume na otu nkebi ebe ị furu efu data maka ezere overwriting ya.
Ọzọ, ka na-agbalị na Windows mbipute a HP HDD data mgbake software ọnụ.
E nwere abụọ mgbake ụdịdị nyere site omume mgbe ị malite ya: Ọkachamara (dị ka a na ndabara) na Standard ọnọdụ.
Ma nke mgbake ụdịdị bụ enyi na enyi na kensinammuo, ha na-arụ ọrụ ahụ dị ka onye ọ bụla ọzọ. Ọzọ, ka na-aga na-esote ma na-Ọkachamara dị ka ihe atụ.
Step2. Họrọ ụdị nke faịlụ na ị chọrọ iji naghachi n'aka HP ike diski.
Step4. Kwado miri iṅomi ma Malite, ma ọ bụ i nwere ike ikwu na ọ bụrụ na gị na disk bụghị e Ị.
Step5. Preview na-agbake furu efu faịlụ site na HP HDD.